प्रलेस : हिङ बाँधेको टालो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
प्रलेस : हिङ बाँधेको टालो
प्रलेस आफैंलाई समेत हेक्का रहेन कि लेखकहरू सत्ताका स्थायी प्रतिपक्षी हुन्, ती सत्ताका ताबेदार होइनन् ।
केही महिनाअघि प्रलेसबारे गम्भीर बहस चल्यो । भनियो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सत्तारोहणपछि सत्ताका जनविरोधी कृत्यको कुनै आलोचना नगर्ने प्रलेसको अब औचित्य छैन । प्रलेस भन्ने संस्था अब नरहे पनि हुन्छ ।’
भाद्र २, २०७५ सरिता तिवारी
काठमाडौँ — प्रगतीशिल लेखक संघले नियमित रूपमा परिसंवाद र छलफल नगर्ने होइन । प्रकाशन पनि नगरेको होइन । भेला र बैठक पनि भइरहन्छन् । तर, यसको चरित्र लगभग कर्मकाण्डी भइसकेको छ । पछिल्लो समय प्रलेस दिशा बिर्सिएर महासागरमा भौंतारिइहरेको जहाजजस्तो बनेको छ ।
सत्तरीवर्षे हुन लागेको प्रगतिशील लेखक संघ (२००९) स्थापनादेखि नै एउटा साहित्यक समूह वा संस्था मात्रै थिएन विचार र दर्शनको आन्दोलनसमेत थियो । अनेक सीमा र कमजोरीका बाबजुद पनि यसले आफ्नो आन्दोलनात्मक चरित्र लामै समयसम्म कायम राख्दै आयो । नेपाली साहित्य र विशेष वैचारिक धारामा यसको भूमिका के कति कारणले स्मरणीय र ऐतिहासिक छ, यसबारे साहित्यका विज्ञ, सचेत पाठक र लेखकवर्ग जानकार भएकै कुरो हो । २००७ सालको परिवर्तनबाट राणातन्त्रको अन्त्यसँगै देश वैश्विक जीवनका खुला विचार र आन्दोलनबाट प्रभावित हुने क्रम थालियो । पुस्तकालय स्थापना गर्ने, संघसंस्था खोल्ने, पत्रपत्रिका/पुस्तक आदि प्रकाशन गर्नेजस्ता कामले तीव्रता पाए । नवचेतनाको त्यही मेहरोमा निबन्धकार, सम्पादक श्यामप्रसाद शर्माको अगुवाइमा प्रलेस गठन भएको हो । प्रलेसको इतिहास लेख्ने साहित्यकार विष्णु प्रभातका अनुसार फ्रेन्च क्रान्ति, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, चिनियाँ जनक्रान्ति, भारतीय स्वाधीनता संग्राम र यिनै विश्व परिवेशको प्रभावबाट नेपालमा भर्खरै (२००७ मा) सम्पन्न जनक्रान्तिको आलोकमा प्रलेस जन्मिएको हो । सेवा सदन वीरगन्जमा भेला भएको सानो समूहबाट संवत् २००९ मा थालिएको प्रलेसको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दा झन्डै डेढ सय जनाको केन्द्रीय संगठन संरचना र देशका ५५ जिल्लामा पुगेका शाखाहरूमा विस्तारित छ । यसले निरपेक्ष कला–साहित्यको एकोहोरो तर्क नगरी जनमुखी र वैचारिक प्रतिबद्धतासहित लेखन/विमर्शको आन्दोलन हाँक्दै आयो । कतिपय सांगठनिक अन्तरविरोधहरू, विवाद र बहसहरू हुँदाहुँदै पनि यसले देशमा चलेका राजनीतिक सांस्कृतिक आन्दोलनहरूको परिपोषक र सहकारी भएर निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । पञ्चायत हुँदै संसदीय प्रजातन्त्रकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षकालसम्म आइपुग्दा पनि यसले आफ्नो साख र प्रभाव घटाएन । तर, व्यापकस्तरमा जनपक्षीय साहित्य–कलाको रचना र प्रसारमा यसको अपेक्षित र उल्लेख्य भूमिका रहन नसकेको पनि सत्य हो । तैपनि प्रलेसले जे–जति गर्‍यो भौतिक आधार र अनुकूलताको विपरित परिस्थितिमा पनि गर्‍यो । यसको सबैभन्दा आलोचनात्मक पक्ष संगठनात्मक संरचना–निर्माणमा वैचारिक सामथ्र्य र हस्तक्षेप गर्ने लेखक होइन घटकीय तदर्थतामा अट्ने लेखकको बाहुल्य रहनु हो । यसबारे संगठनभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ । तर पनि देशका लगभग सबै धारा र क्षेत्रका वामपन्थी लेखकहरू यसको छातामा गोलबद्ध भइरहे । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।
स्थिति अतीतको भन्दा भिन्दै छ । सत्ता, संस्थापन र आफूलाई माक्र्सवादी भन्न रुचाउने लेखक दुवैको अवस्था आज ‘क्रिटिकल’ छ । दुवैको विश्वसनीयता परीक्षित छ । तर, राजनीतिक सत्ताको बग्गी हाँकेर हिँड्ने ‘प्रगतिशील’ हरूको भन्दा कति हो कति चर्को र खरो परीक्षा प्रगतिशील लेखकहरूको हिस्सामा परेको छ । विगतको सत्ता संस्थापनसँग वैचारिक सांस्कृतिक आन्दोलन गरुन्जेलको प्रगतिशील लेखक संघ जति धारिलो र स्पष्ट थियो आज त्यो धार र स्पष्टताको संकट सहजै अनुभव हुन्छ । यद्यपि माथि भनिएजस्तै नेपाली साहित्यमाथिको समग्र प्रभावका दृष्टिले यसमा अपेक्षित गुरुत्व र ओजको कमी पहिले पनि नभएको होइन । तर, कम्तीमा पनि राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत तप्काको बाहुल्यले यसको आन्दोलनात्मक चरित्रमा यसअघि त्यस्तो उल्लेख्य संकट देखिएन जति आज गोचर हुन्छ । जसै हिजोका प्रगतिशील र ‘क्रान्तिकारी’ राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताको ‘कुट’ राजनीतिभित्र भासिँदै गए र अन्तत: सांस्कृतिक रूपले नै उनीहरूको इमान र प्रतिबद्धता संशयको घेरामा पर्न थाल्यो तसै प्रलेसको निधारमा त्यसको दुरुस्त प्रतिच्छायाको दुखान्त देखिन थाल्यो । यो बहुतै डरलाग्दो कुरा हो । प्रलेससम्बद्ध लेखकले बिस्र्यो वा मान्न इन्कार गर्‍यो कि पार्टीसत्ता वा तत्जन्य प्रतिदानभन्दा कता हो कता माथि छ वैचारिक प्रतिबद्धताले सुसज्जित लेखनसत्ता । प्रलेस आफैंलाई समेत हेक्का रहेन कि लेखकहरू सत्ताका स्थायी प्रतिपक्षी हुन्, ती सत्ताका ताबेदार होइनन् । लेखकको भूमिका जहिलेसुकै र जहाँसुकै रचनात्मक आलोचकको रूपमा रहन्छ ।
एउटा प्रतिबद्ध विचारवान लेखक र उसको सम्बद्ध संगठन आफैंमा शक्तिशाली सत्ता हुन् । त्यस्ता लेखक र संगठन कुनै अर्कोथरी सत्ताको निगाहमा बाँच्ने बफादार प्राणी होइनन् । यो प्रगतिशील भन्न रुचाउने हरेक लेखकले दिमागमा गाँठो पारेर राख्ने कुरा हो । तर, रमाइलो कुरा के छ भने आजको मितिको हाम्रो ‘प्रगतिशील’ लेखक बडो चलाख र ‘समझदार’ भएको छ । प्रतिबद्धता र पक्षधरताजस्ता आधारभूत प्रश्नलाई ऊ विचारको ठूलो फलक बोक्ने प्रगतिशील र समाजवादी आन्दोलनसँग होइन र मात्रै लोभ, स्वार्थ र छुद्रता मिल्ने स्वार्थ समूहअनुकूलको पार्टी प्रतिबद्धतासँग जोड्छ । त्यही कुराको तरफदारी र ताबेदारी गर्छ ।
सत्ता राजनीतिमा अनुकूल भाषाको लेपन गर्न जानेपछि, परिस्थितिलाई विशिष्ट राजनीतिक ध्वनि र पदावलीले सिँगार्ने कला भएपछि पतनको अन्तिम विन्दुसम्म पुग्दा पनि त्यसको भेउ नपाइँदो हो । यो अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा उन्माद आउन सक्छ । त्यसले विगतमा हिँडेको दुष्कर बाटोलाई बिर्सेर अर्कै बाटो हिँडिदिन पनि सक्छ । तर, सत्यको अन्वेषण गर्ने कसम खाएर हिँडेको आफूलाई माक्र्सवादी दाबी गर्ने लेखक सत्यच्यूत र नैतिकहीन हुनु किमार्थ ग्राह्य मानिँदैन । उसले त सकेसम्म दिशाहीन हुन लागेको राजनीतिक नेतृत्वलाई तिनले छोडिरहेको विचारको लिकबारे सतर्क बनाउन पो सक्नुपर्छ । रचनात्मक आलोचक पो बन्न सक्नुपर्छ ।
लेखकको प्रतिबद्धता केमा ?
यो देशको नयाँ इतिहास रचनामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दिएको योगदानको कदर गर्नैपर्छ । तिनले हाँकेका आन्दोलन, विद्रोह र चलाएको वैचारिक दीक्षाको प्रभाव बलियो थियो र त आज उनीहरू सत्तासीन हुन सके । आजको अवस्था मूलत: विगतका संघर्षहरूको परिणति नै हो । तर, आजको मितिमा कम्युनिस्ट नेतृत्वसँग न्यूनतम कम्युनिस्ट चरित्र छ कि छैन ? सरोकार यहाँनेर हो । हामी लेखकलाई समेत राजनीतिक कार्यकर्ता मान्छौं तर त्यो परम्परित अर्थमा होइन । लेख्नु आफैंमा एउटा ‘पोलिटिकल एक्ट’ हो भन्ने मान्छौं । लेखक विचारले प्रतिबद्ध र दिशाबोधले सुसज्जित कर्मी हो भन्छौं । उसले विचारको हस्तक्षेपबाट आफ्नो समयको बौद्धिक नेतृत्व गर्छ । ऊ आफ्नो स्वायत्त विवेकले विचारमा कन्भिन्स हुन्जेल पार्टीका एजेन्डा र प्रस्तावनाको समर्थनसमेत गर्छ । उसको लेखन आन्दोलन र विद्रोहहरूको सहवर्ती पनि बन्छ । तर, निसर्त र निरपेक्ष रूपले होइन । पार्टीको नियत र नीतिमा संरचनागत खोट नजर नहुँदासम्म लेखकले केवल आफ्नो विवेकको सर्तमा पार्टीलाई समर्थन गर्छ । तर, जसै त्यहाँ खोट र बद्नियत गोचर हुन्छन् लेखक सतर्क हुनैपर्छ । लेखक कसैका बदनियतलाई पिठ्युँमा बोकेर हिँड्ने निर्धो प्राणी होइन । ऊ विचारको उत्पादन गर्ने कर्ता हो । ऊ आफैं एउटा शक्तिशाली निर्णायक हो । आफूजस्तै लेखकहरूको समुदायको एउटा बलियो हिस्सा हो । शक्तिकेन्द्र र सत्ताको भरिया होइन । यस अर्थमा लेखकको प्रतिबद्धता मूलत: वैचारिक हुन्छ । र विचार केवल झन्डा र चुनावचिह्नले चिनिने त्यति दरिद्र र सीमित कुरा होइन ।
सैन्य तानाशाहसँग लड्दै ल्याटिन अमेरिकाको सामाजिक संघर्षसँग जोडिएर जीवन बिताएका उरुग्वेली लेखक एडुआर्डो गालेआनो लेख्नु मृत्युसँग लड्नुजस्तै हो भन्छन् । ‘लेख्नका लागि’ भन्ने निबन्धमा उनी भन्छन्, लेखनले लड्नु हामीभित्र र बाहिर जतासुकै फैलिरहेको मुर्दा उदासी र शुष्कताविरुद्ध उभिनु हो । अन्यायको विरुद्ध जितको सुखद अनुभूति बाँड्नु हो । आफू र अरूलाई समेत एक्लै छु भन्ने डरबाट बाहिर निकाल्नु हो ।’ यस भनाइको आलोकमा आजका प्रलेससम्बद्ध लेखकका अनुहार जाँच्ने हो भने अधिकांशमा एउटा यस्तो भगौडा र चतुर आकृति देखिन्छ जसले आवरणमा माक्र्सवाद त ओढेको छ तर लेखन र ब्यवहारमा पूरै प्रतिक्रियावादी र संस्थापनका विचारको पक्षपोषण गरिरहेको छ । यस्तो बेला प्रतिबद्धता शब्द आफैं सरमले निहुरिन्छ । जनजीवनका ज्वलन्त प्रश्न एकातिर छन् । दलाल पुँजीवादको छातामुनि माफिया संरक्षणको बलमा बाँडिएको समाजवादको सपना र आर्थिक समृद्धिको तर्क भद्दा मजाकजस्तो लागिरहेको छ । देश खाडीमा बगेको रगत पसिनाको मूल्यमा चलेको छ । उत्पीडित वर्ग र समुदायका आन्दोलन यत्तिकै थाती छन् । यौनजन्य हिंसा र बर्बर हत्याले समाज यातनागृहजस्तो बनिसक्यो । तर, हाम्रो प्रगतिशील लेखक आवाजहीनहरूको आवाज बन्ने कुनै त्यस्तो चुनौतीपूर्ण इच्छा पाल्दैन । ऊ संगठनमा आबद्ध छ । बस्, यही नै उसको प्रतिबद्धताको दसी हो । चाकरी र दासता नै जब प्रतिबद्धताको रूप बन्छ, त्यहाँ हरेक क्षण ‘प्रगतिशील’ शब्दको मानमर्दन भइरहेको हुन्छ । यतिबेला प्रलेस इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यो प्रलेस हो वा पार्टीका कृतदास र अनुचरहरूको मण्डली मात्रै ? यसको जवाफ प्रलेसका हरेक सदस्यसँग हुनुपर्छ ।
वैचारिक संकट र प्रलेस प्रेत
एक माक्र्सवादी मित्रले सप्रसंग भने, ‘प्रलेस विचारले त उहिल्यै मरिसक्यो, अहिले त्यसको प्रेतमात्रै बाँकी छ ।’ म स्वयम् प्रलेससँग २०६३ देखि जोडिएकी छु । ०६९ देखि ०७२ सम्म चितवन शाखाको अध्यक्ष रहें । आफ्नो बुताले भ्याएसम्म रचनात्मक सम्भावनाहरू खोज्दै काम गरें । यसरी काम गर्दा कतिपय परम्परित शैली र ढर्रामा सापेक्षित सुधारको प्रयत्न पनि गरें । मेरो टिम उस्तो गतिलो थिएन । तर, चितवनका शुभेच्छु लेखकहरू रामहरि श्रेष्ठ, इन्द्र रेग्मी, प्रकाश चापागाईं आदिको सहयोग र हौसलाले मलाई नैतिक बल दिइरह्यो । हरेकपल्ट नौलो अभ्यास गर्दै काम गर्दा कहिलेकाहीं प्रलेस, केन्द्रसँग टकराव हुन्थ्यो र हरेकपल्ट त्यसलाई सल्टाउँदै अघि बढियो । प्रकाशन र छलफलहरू भए । प्रलेसका पुराना सदस्य र वर्तमान समयका निख्खर आलोचकहरूलाई समेत निम्ताएर सकेसम्म वामपन्थका सबै धाराहरू र प्रजातान्त्रिक विचारलाई समेत समेट्दै विमर्शहरू गरियो । जिल्लामा प्रलेस अन्य संस्था र समूहका लागि समेत एउटा बलियो चुनौतीका रूपमा दरियो । यसरी काम गर्दा म सन्तुष्ट नै थिएँ । एकसरो मान्छे, साना बच्चा, गृहस्थीको बोझ र थोरै आम्दानी भएकी म त्योबेला सानोतिनो उत्साह र प्रतिबद्धताले लागेकी थिइनँ । त्यसको एउटै मात्र प्रेरणा प्रलेसको विगत इतिहास थियो । यसले पक्रेको माक्र्सवादी र सामाजिक न्याय पक्षधर विचार थियो ।
अहिले प्रलेसको केन्द्रमा छु । एकप्रकारले भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पद ओगटेर बसेकी छु । तर, मैले केही काम गरेकी छैन । काम गर्न नसक्नुका पछाडि केही वैयक्तिक कारण मौजुद छन् । भौतिक दूरी अर्को कारण हो । तर, तीभन्दा बलिया कारण वैचारिक हुन् । प्रलेस केन्द्रले नियमित रूपमा परिसंवाद र छलफल नगर्ने होइन । प्रकाशन पनि नगरेको होइन । भेला र बैठक पनि भइरहन्छन् । तर, यसको चरित्र लगभग कर्मकाण्डी भइसकेको छ । पछिल्लो समय प्रलेस दिशा बिर्सिएर महासागरमा भौंतारिइहरेको जहाजजस्तो बनेको छ । क्याप्टेनलाई दु:ख अवश्य छ । उनका दु:ख वैचारिकभन्दा पनि कसको चित्त कसरी बुझाएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरौं भन्ने नै देखिन्छ । जोकोही आउँछन्, विचार र कार्यसूचीको तर्क होइन, पार्टी, गुट र समूहको अहंकार बान्ता गर्दै दन्तबझान गर्छन् । तिनलाई थान्को लगाउँदै डुंगाको स्टेरिङ घुमाउँदा क्याप्टेनको मुहारमा प्रकट उदासी बाहिरबाटै देखिन्छ । के यसरी प्रलेस चल्छ ? चल्दैन । के यस्तो संस्था प्रलेस हुन्छ ? हुँदैन ।
केही महिनाअघि प्रलेसबारे गम्भीर बहस चल्यो । भनियो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सत्तारोहणपछि सत्ताका जनविरोधी कृत्यको कुनै आलोचना नगर्ने प्रलेसको अब औचित्य छैन । प्रलेस भन्ने संस्था अब नरहे पनि हुन्छ ।’ त्यसमा जमेर समर्थन, आलोचना र प्रत्यालोचना भयो । प्रलेस मर्नुपर्छ भन्ने तर्कले मलाई कतै नमीठोसँग पोलेको हो त्यो बेला । अहिले पनि पोल्छ । ती ज्ञात अज्ञात अग्रजहरूको दुु:ख र संकल्पको स्मरण मात्रैले पनि पोल्छ । यद्यपि प्रलेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लेखक युग पाठकको किताब ‘माङ्गेना’ माथि चितवनमा छलफल चलाउन खोज्दा साथीहरूबाट आएको धम्की र चेतावनीपछि मेरो च्याँख मर्दै आएको पनि साँचो हो । त्यतिबेला मैले प्रतिकार गर्दै उहाँहरूलाई भनेकी थिएँ, कुनै किताब र विचारलाई ‘ब्यान’ गर्ने असहिष्णुता र धम्कीविरुद्ध सम्झौता गरिन्नँ † कार्यक्रम भव्य रूपमा भयो । यो प्रसंगले मलाई प्रलेस वैचारिक रूपले सिद्धिएको पुख्ता प्रमाण मिलेको हो ।
विचार संगठन–जीवनको कम्पास हो । अहिले प्रलेससँग त्यो कम्पास छैन । कम्पास पार्टी हेडक्वाटरका बनियाहरूको हातमा छ र प्रलेस केवल एउटा कठपुतलाजस्तो बनेको छ ।
प्रलेसका मुखियाहरूले आफ्ना पदलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाएर प्रज्ञाको मझेरीमा उक्लेको आरोप खान थालेको कुरो पनि अब पुरानो भइसक्यो । पछिल्ला दिनमा त यसले प्रतिपक्षी चरित्रसमेत गुमाइसकेको छ । विचारको संकट घोर डरलाग्दो मोडमा छ । यसबारे मसँग कैयौं अप्रिय अनुभवहरू छन् । प्रलेससँग लामो समयदेखि जोडिएका लेखक स्नेह सायमी प्रलेसको यो संकट आजको मात्र होइन दस वर्ष अघिदेखिको हो भन्छन् । सायमीले भनेजस्तै स्वतन्त्र वाम लेखकहरूलाई समेट्न नसक्नु, तिनका आलोचना सुनेर रचनात्मक रूपले आफूलाई सच्याउन नसक्नुलगायतको रोग नयाँ होइन । आलोचनात्मक चेतना र प्रतिपक्षी चरित्र नै रित्याएर विचारको हिङ बाँधेको टालाको आडम्बर मात्रै बोकेर हिँड्नुले भने प्रलेसको साख र नूर गिरिसकेको स्थिति स्पष्ट छ । यो यत्तिकै बिस्तारैबिस्तारै मर्ला कि बौरिएर उठ्ने होला भन्ने कुरो उसको आत्मबोधमा भर पर्छ ।
साक्षी छ किलिमन्जारो
आज सेन्ट्रल सेरङ्गेटी जाने तालिका छ । जनावरको घना बस्ती यहाँ रहेछ । एकै प्रकारको जनावर संख्यामा तलमाथि मात्रै कति हेर्ने ?
अमेरिकाको बोस्टनबाट झन्डै २० घण्टा जहाजमा उडेर छोरा विशाल तान्जानियाको किलिमन्जारो उत्रिएका थिए । यता काठमाडौंबाट बाबु विश्वकान्त पनि १० घण्टा उडेर किलिमन्जारो पुगेका थिए । अब सुरु हुन्छ, बाबुछोराको तिलस्मी यात्रा— जीवजन्तुको स्वर्गलोकतिर ।
श्रावण २६, २०७५ विश्वकान्त मैनाली
काठमाडौँ — हरीया जीवन, भीडभाड, होहल्ला र एकरसको दैनिकीबाट उम्केर अलिक पर जान मन लाग्छ कहिलेकाहीं, प्रकृतिको समीपमा । यो सनातनी र कृत्रिम लाग्ने जीवनशैलीबाट भिन्न जगत्बारे यदाकदा टेलिभिजन सेटमै केही झलक हेर्न पाए पनि आनन्द महसुस हुन्छ । नेसनल जोग्राफी र एनिमल वल्र्ड हेरेर रमाउने स्वभाव धेरैमा हुन्छ । यसपटकको मेरो आनन्दलाग्दो यात्रा अवसर भने ‘जनावरको स्वर्गभूमि’ मानिने तान्जानियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाने साइतसँग जोडिएको छ ।
मलाई पूर्वी अफ्रिकाको केन्या, तान्जानिया र उगान्डाका निकुञ्जहरू चहार्ने मन धेरै अघिदेखि थियो । अमेरिकाको बोस्टन बस्ने जेठो छोरा डा. विशाल र म काठमाडौं बस्ने बाबुले मिलाएको तालिकामा गत जुन ३० मा एकै पटक किलिमन्जारो एयरपोर्ट उत्रने फुर्सद निकाल्यौं । संसारमा नाम बनाएको तान्जानियाको सेरेङगेटी निकुञ्जको रमाइलोमा केही दिन हराउने ‘मेनु’ हामीसँग थियो ।
तालिकाअनुसार विपरीत दुई ध्रुवबाट जहाजमा उडेर हामी किलिमन्जारो एयरपोर्ट उत्र्यौं, साथमा प्याकेज टुर सफारी एजेन्ट थियो नै । किलिमन्जारो उत्रिएकै साँझ अरुसा सहरको सफारी होटलमा पुग्यौं । डच स्वामित्वको होटल निकै सुविधाजनक थियो । नेपाल र तान्जानियाको समयअन्तर अढाई घण्टा जतिको रहेछ, रातको निद्रा र बसाइमा अरू समस्या देखिएन । तान्जानिया विगतमा ब्रिटिस उपनिवेश भएको र अरुसा सहर पर्यटक केन्द्रसमेत भएकाले त्यहाँ कतै गल्फ कोर्स हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । नभन्दै सहरबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा किलिमन्जारो गल्फ कोर्स रहेछ । यात्राको पहिलो दिन हामी बाबु–छोरा गल्फमै रमाइरहयौं । जुलाई १ को दिनभर गल्फ खेल्यौं र बेलुका सहर घुम्दै होटल फिर्‍यौं ।
निकुञ्ज भ्रमणको तालिकाअनुसार बिहान ७ बजे सफारीका लागि गाडी आइपुग्यो । गाइड र ड्राइभर एकै व्यक्ति हुने रहेछन्, राम्रो अंग्रेजी बोल्ने । टोयोटा लेन्डक्रुजरको पछिल्लो भाग सफारीका लागि बनाइएको रहेछ । वरपर निकै पर्यटक थिए— कोही एक्लै, कोही परिवारमा अथवा कोही ठूलो समूहमा । अरुसा सहरबाट सेरेङ्गेटी नेसनल पार्क निकै टाढा रहेछ । गोरोङगोरो पार्क हुँदै सेरेङ्गेटी जाने रहेछ । पार्कभित्र पस्नासाथै अनगिन्ती जनावर देखिन थाले । आज हामी केन्याको सिमाना छेउछाउमै बास बस्न पुग्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर गाडीको गति तीव्र थियो । बाटोभर समूह–समूहमा सिंहहरू भेटिए । हात्ती, भैंसी, मृगका परिवारजस्ता इम्पाला, गजेल रस्याल, हाइना, चितुवा, चेता, बबुन (ठूलो बाँदर) को समूह, गाईको मिश्रित रूपको जंगली ‘बिस्ट’ र जेब्रासमेत देखियो । करिब १२ घण्टाको तुफानी यात्रापछि राति करिब ८ बजे झमक्क साँझ परेपछि निर्धारित क्याम्पमा पुग्यौं । अस्थायी पालको क्याम्प थियो त्यो । बन्यजन्तुको संसार टहल्न अमेरिका, क्यानडा, श्रीलंकाबाट समेत पर्यटक ओइरिएका थिए ।
दिनभर गाडी बेपत्ता दौडिएकाले शरीरमा थकान थियो नै । खाना खाएर पालमा सुत्न गयौं । स्थानीय कर्मचारीले ‘राति पालबाट बाहिर ननिस्कनुहोला’ भन्दै हिंस्रक जनावरहरू घुमिरहेका हुन सक्ने जानकारी दिए । पालभित्रै सबै सुविधा भएकाले बाहिर निस्कनु जरुरी पनि थिएन । रातमा पालकै छेउछाउमा सिंह कराएको सुनियो । अरू जनावरको चहलपहल पनि सुनियो । भय मनमा रहिरहयो । निदाउने, ब्यँुझने गर्दै रात बित्यो ।
बिहान ब्रेकफास्टपछि केन्याको सिमानामा रहेको मारा नदीतर्फ यात्रा सुरु गर्‍यौं । मारा नदीतर्फ जाँदा भर्खरैजस्तो मात्रै एउटा अजंगको राँगोलाई सिंहले मारेर खाइरहेको दृश्य देखियो । सिंहले सिकार गर्दा सकभर मुहान, खोलाको पानी छेउमा गर्दो रहेछ । सिकार गरेको ठाउँको नजिकै खोला थियो । सिकार गर्दा सिंह–सिंहिनी सबै मिलेर गर्दा रहेछन् । अजंगको राँगोलाई खेदेर, लडाएर सिकार गर्ने क्रममा सिंह पनि थाक्ने भएकाले सिकार गरेपछि सिंहले आराम गर्ने रहेछ । सामुमा रहेको सिकारलाई सिंहले नखाईकन सिंहिनीले नखाने रहेछ । हामीले करिब एक घण्टा त्यो दुर्लभ रमित हेर्‍यौं । सिकार खाएपछि सिंह पानी खान गयो । अनि सिंहिनी आएर खान थाली । सिंहले एक पटकमा ५ किलोसम्म मासु खाँदो रहेछ । एक पटक खाएपछि २–४ दिन नखाने रहेछ । ७ दिनसम्म नखाएर पनि बस्न सक्छ रे । दुइटा सिंह एक ठाउँमा बस्ने रहेनछन् । एक सिंहको आधिपत्य क्षेत्र झन्डै ४० किलोमिटर वरपर हुन्छ रे । एक झुन्डमा एक सिंह र धेरै सिंहिनी तथा बच्चाहरू हुन सक्ने रहेछन् ।
मारा नदीको किनारमा बसेर लन्च खाइरहँदा नदीभर थुप्रै गोही र हिप्पोपोटामस देख्यौं । गोही मांसाहारी र हिप्पो शाकाहारी भए पनि मिलेर बस्दा रहेछन् । हिप्पोसँग गोही पनि डराउँदो रहेछ । गोहीले एकपटक सिकार गरेपछि ६ महिनासम्म नखाएर बस्न सक्छ रे ।
मारा नदी छेउछाउमा हामीले लाखौं वाइल्ड–बिस्ट र जेब्रा देख्यौं । त्यत्रो संख्यामा मैले जनावर कहिल्यै देखेकै थिइनँ । बाहिरबाट हामीले हेर्दा एउटै जनावरको परिवारजस्तो लाग्छ तर उनीहरू भित्र आ–आफ्नो परिवारको भिन्न–भिन्न झुन्ड हुँदोरहेछ । बच्चाले आमा खोजिरहेको, भालेले आफ्नो समूहलाई एकजुट बनाइरहेको आदि देखियो ।
तान्जानियाबाट केन्याको घाँसेमैदान जान मारा नदी नतरी अर्को बाटो रहेनछ । यो जुलाईमै नदी पार गर्ने रहेछन् । नदी पार गर्ने समयबारे गोहीलाई थाहा हुँदो रहेछ । गोहीहरू निकै चनाखा भएर बसेका थिए । यो नदी पार गर्ने ताँती (सेराङ्गेटी ट्रेल) हेर्न सयौं पर्यटक मारा नदी छेउमा बस्ने रहेछन् । खोला तर्ने समय, ठाउँ र दिन पनि परिवारको नेताले तोक्दो रहेछ । हिप्पोले मासु नखाए पनि सामुमा आइपरे मार्न सक्ने र गोहीले भने आहाराकै लागि मार्ने गर्दो रहेछ । हजारौं जनावर मारा नदी तरेर केन्या जाने क्रममा बाटैमा सहिद हुँदा रहेछन् । करिब २ घण्टा जति मारा नदीमा हिप्पो र गोहीको चर्तिकला हेरेर हामी फक्र्यौं । डिलमा बसेका हामी पर्यटकको छायाबाटै गोही निकै चनाखो भएको देखिन्थ्यो ।
मारा नदीबाट फर्केर हिजो बास बसेको क्याम्पतर्फ लाग्यौं । बाटामा हात्तीका फौज, भैंसीका झुन्ड, गिद्ध प्रशस्तै देखिए । जिराफ पनि देखिए । तर, जिराफको सन्तान उत्पत्ति निकै कम हुने तथा बेलाबेलामा सिंहको सिकारमा पर्ने भएकाले जिराफको झुन्ड देख्न भने मुस्किल थियो । देखिए पनि भालेपोथि धेरैजसो सँगै हुन्थे । र, कहीं कतै बच्चा पनि देखिन्थ्यो । सिंह–सिंहिनीले पछाडिपट्टिबाट आक्रमण गर्ने रहेछन् । आक्रमणमा परेपछि जिराफ निरीह हुने रहेछ ।
बाटामा चितुवाका दुई दाजुभाइ खेलिरहेका थिए । ‘चेता’ भने आफ्नो सिकार रूखमा झुन्डयाएर आराम गरिरहेको थियो । चितुवा र चेतामा फरक रहेछ । त्यो जंगलमा बाघ–भालु भने रहेनछ । सर्प प्रशस्तै छ भन्थे तर घाँसे मैदान भएकाले बाटोमा कुनै सर्प देखिएन । चराचुरुंगी प्रशस्तै रहेछन् ।
हात्ती, गैंडाबाहेक सिंहसम्मको पनि सरदर आयु १० देखि २० वर्षसम्मको हुँदो रहेछ । मासु खाने, सिकार गर्ने जमात भए पनि बाटोमा सिनो गनाएको पत्तो भएन । सबै सिनो खाएर गिद्द, हाइनाले सफा पार्ने रहेछन् । कुनै अवस्थामा जनावर घाइते भएमा र समूहबाट छुट्टिएर बस्नुपरेमा आमाले कुरुवा काम गर्ने रहिछन्, अन्तिम साससम्मै । प्रत्येक जनावरको समूहले आफ्नो बच्चालाई जोगाउन जमातबीचमा राख्ने रहेछन् । सबै प्राणीले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने रहेछन्, आफ्नै काइदामा । तर, निरीह प्राणी बलियाका अगाडि कमजोर हुन्छन् नै, प्राणी जगत्मा ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ को सूत्रपात यहींबाट भएको हो ।
आज सेन्ट्रल सेरङ्गेटी जाने तालिका छ । जनावरको घना बस्ती यहाँ रहेछ । एकै प्रकारको जनावर संख्यामा तलमाथि मात्रै कति हेर्ने ? बरु भूबनोट, प्रकृति, रूखपात, चराचुरुंगीतर्फ ध्यान जान थालेको थियो । काडेदार रूख फाट्टफुट्ट मात्रै देखिने । रूख घना पनि छैनन्, ठूला पनि छैनन् । मानिसको कम्मर–कम्मरसम्मको घाँसे मैदान । जनावर लुक्नलाई साह्रै सजिलो । घाँसको ५ फिटभित्रै सिंह सुतिरहेको देखिन्छ । उसलाई भोक छैन, तिर्खा छैन । सिंहिनीसंग मस्त सुतिराखेको छ । पर्यटकहरूलाई आँखा उघारेर हेर्दा पनि हेर्दैन । ऊ भयरहित छ ।
सबै जनावरहरू आगन्तुक पर्यटकप्रति मैत्री पाएँ । गाडीभित्र बसेर जीवजन्तुको जति नजिक गए पनि कुनै हानिनोक्सानी गरेको पाइनँ । निकुञ्ज नियममा यहाँभित्र कुनै हतियार लिएर जान पाइँदैन ।
आत्मसुरक्षा भनेको आफ्नो होसियारी र जनावरको विवेक मात्रै हो । सिंह, हात्ती वा राँगाले चाहेमा गाडीमा आक्रमण गरेर मार्न पनि सक्छन् । गाडी पल्टाइदिन सक्छन् । सुत्ने पाललाई हाइना, सिंहले च्यातचुत पार्न पनि सक्छन् । तर, आजसम्म त्यस्तो घटना भएको वा आक्रमणमा परेको इतिहास छैन रे ।
राति हामीहरू सेरेङ्गेटी ट्रेल क्याम्पमा बास बस्न पुग्यौं । त्यो क्याम्प भने स्थायी रहेछ, निकै सुविधाजनक । पार्क बीच–बीचमा क्याम्प छन् । ती क्याम्पहरू स्थायी वा अस्थायी दुवै छन् । एकथरी क्याम्पहरू बसाइ सरिरहन्छन् जनावरसँगै । अर्काथरी क्याम्पहरू स्थायी छन् । यो स्थायी क्याम्पमा बास बस्दा मेरो मनमा अनेक कल्पना उब्जिए । नेपालको चितवन जंगलमा राजा–महाराजा बेलायती पाहुनालाई लिएर सिकार खेल्न जान्थे । आफूलाई पनि त्यस्तै विशिष्ट पाहुना सम्झिएँ मैले ।
क्याम्पमा डिनर खाने क्रममा थियौं । चर्को गरी भैंसी कराएको आवाज आयो । क्याम्प म्यानेजरले भन्यो— जनावरमा सबैभन्दा दरलाग्दो भैंसी हुन्छ । त्यसले लखटेपछि छाड्दैन ।
मैले म्यानेजरसँग जंगल, जनावर र डरत्रासबारे कुरा गरें । त्योभन्दा अघि यहाँका बासिन्दा र जातजातिबारे कुरा गर्न चाहें । उनले बेलिविस्तारमा भने— तान्जानियामा १२३ जातजाति छन् । त्यसमध्ये मसाई पनि एक जाति हो । म पनि मसाई हुँ । हामी घुमन्ते जाति हौं, गाईबाख्रा अथवा भेडा चराएर हिंड्ने जाति । राजनीतिमा लागेका र पढेलेखेका मसाईहरू शक्तिमा छन्, व्यापारमा छन् । तर, आज पनि हाम्रा धेरै आफन्त ‘नोम्याड’ छन्, फिरन्ता । उनीहरू खेतीपाती पनि गर्दैनन्, कहींकतै स्थायी घर पनि छैन । गाईबस्तु र बाख्रा–भेडा चराउँछन् । घाँस–पानीका लागि बसाइ सर्दै हिंड्छन् । उनीहरूको खाना भनेको गाईको दूध, मासु र गाईगोरु, बाख्रा, भेडाको रगत मात्रै हो । आइपरेमा मसाईहरू सिंहसँग पनि जुध्छन् । बेलाबेलामा जनावरसँगको भीडन्तमा मसाई पनि मरेका छन् । मसाईलाई पार्क छेउ वा आसपासमा सरकारले चरन छुट दिएको हुन्छ ।
यो गोरोङगोरो क्रिएटर कन्जर्भेसन आजभन्दा झन्डै चालीस लाख वर्षअगाडि बनेको हो अरे । ज्वालामुखीले उब्जाएको काठमाडौं उपत्यकाभन्दा ठूलो भूभाग । यहाँ संसारभरकै सबै जातका जनावर देख्न पाइने रहेछ । ठूलो गहिरो खाल्डो भएकाले यहाँका जनावरहरू बसाइ सरेर कतै नजाने रहेछन् । बीचमा तलाउ छ तर पूरै नुनिलो । धाप छ, ताजा पानीको खोला पनि छ । यसमा फ्लेमिंगोलगायत धेरै चराचुरुंगीको बसोबास छ । हिंस्रक, नहिंस्रक, मांसाहारी अथवा शाकाहारी सबै प्राणी यहाँ छन् । प्रकृतिले साँच्चै सन्तुलन कायम गरेको छ । यहाँको जीवजन्तु जगत् र भूबनोट निरीक्षणपछि पहाडको उच्च क्याम्पमा आएर हामी बस्यौं । प्रशस्त संख्यामा हाइना भएकाले रातभर कराएर सुत्नै पाइएन ।
आज तरानगिरे नेसनल पार्कतिर हामी पुगेका छौं । यहाँ हात्तीको बथान धेरै देखियो, धेरै ठूलाठूला हात्ती । अफ्रिकामा भने एसियामा जस्तो हात्तीलाई घरपालुवा बनाउने र काममा लगाउने गर्दा रहेनछन् । पार्कमा एक शताब्दी पुराना ‘बओबाब’ रूख देख्यौं, एकदमै ठूलो फेद भएका । यहाँसम्म कतिपय पर्यटक अरुसा सहरबाट एकदिने यात्रामा पनि आउने रहेछन् । सबै निकुञ्जमा मुख्य ५ जनावर सिंह, हात्ती, दुई सिंगे गैंडा, चितुवा आदि देखिने रहेछ ।
साँझ राष्ट्रिय निकुञ्जको यात्रा पूरा गरेर बास बस्न अरुसा सहरमा आयौं । ५ दिनसम्म दिनहुँ १०/१२ घण्टा गाडीमा औसत १५ सय किलोमिटर दौड्दा जीउ थिलोथिलो भइसकेको थियो । तर, अनुभव र अनुभूति भने एकदमै नौलो थियो । यात्रामा जनावरबाहेक दुई प्राणीको ठूलो भय रहेछ, ‘से से झिङ्गा’ र लामखुट्टे । झिंगा जसले टोकेर रोग सारेपछि ‘अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस’ लाग्ने रहेछ जसले ज्यानै लिने रहेछ । र, अर्को लामखुट्टेबाट मलेरिया सर्ने रहेछ ।
सन् १९६१ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट तान्जानियाले उन्मुक्ति पाएको रहेछ । तर, यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सन् १९५१ म ब्रिटिस पालामै घोषणा भएको रहेछ । यहाँका निकुञ्जमा पृथ्वीभरकै जीवजन्तुले बास पाएजस्तो अनुभूति हुने रहेछ । तान्जानियाको भूगोलभित्र निकुञ्ज परे पनि त्यो यी जीवजन्तु सम्पूर्ण पृथ्वी र हामी सबै मानव जातिको साझा सम्पत्तिझैं अनुभूति भयो ।
यथार्थमा केन्या र तान्जानिया भिन्न भूगोल (देश) भए पनि आफ्नो क्षेत्रका जनावरका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएर साझा संरक्षण गर्दै संसारमै उदाहरण बनेका छन् । जनावरहरू राजनीतिक सीमामा विभाजित हुन चाहँदैनन् भन्ने दृष्टान्त देखाएका छन् ।
अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो पहाड किलिमन्जारोको नाम खुबै सुनेको थिएँ । यही पहाडको नाममा यहाँको एयरपोर्ट नामकरण गरिएको रहेछ । बेलुका घर फर्कने फ्लाइट थियो । सफा मौसम र घमाइलो दिन भएकाले माथि बिमानबाट पनि किलिमन्जारो देख्न सकिन्थ्यो । १९ हजार फिटको उचाइमा उभिएको पहाडको फेदमा हिउँले ढाकेको ज्वालामुखीको मुख देखिन्थ्यो । हरेक वर्ष धेरै पर्वतारोही किलोमन्जारो चढ्न जाँदा रहेछन् । नेपाली पर्वतारोहीले पनि यो पहाड चढेका रहेछन् ।
जतिसुकै परिपक्व भए पनि छोराको बिदाइमा बाबुको मन गह्रुंगो हुन्छ नै । अब किलिमन्जारोबाट छोरो विशाल अर्कै गोलाद्र्धको अमेरिका उड्दै थियो । म भने आफ्नै घर फिर्दै थिएँ । हामी बाबुछोरा एयरपोर्टमा भेट्टिएका थियौं, फेरि एयरपोर्टबाटै छुट्टियौं— किलिमन्जारो साक्षी राखेर ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०९:१६